စာဖတ်ချိန်:5မိနစ်များ(နောက်ဆုံးတွင်နောက်ဆုံးရေးသားချိန်: 05/03/2021)
ဂျူလီယန်, လာမယ့်မိဖုရားနှင့် Wilhelmina ရဲ့သမီး, ဂုဏျဘုရင်မကြီးရဲ့နေ့တွင် 30 အပေါ်ချီတက်ပွဲနှင့်အတူပြီလ Soestdijk. Beatrix ထို့အပြင်အပေါ်ဘုရင်မကြီးရဲ့နေ့ကျင်းပခဲ့သည် 30 ဧပြီလ (သူမ၏ကိုယ်ပိုင်မွေးနေ့ကိုဇန်နဝါရီလ၌တည်ရှိ၏) ဒါပေမယ့်သူမ၏မိခင်မှဆန့်ကျင်, သူမကသူမ၏မိသားစုတစ်စုလုံးကို ယူ. တိုင်းပြည်တစ်ဝှမ်းခရီးထွက် အများအပြားမြူနီစီပယ်သွားရောက်ကြည့်ရှုရန်. ရှငျဘုရငျ Willem Alexander က ဒီအစဉ်အလာကိုလိုက်နာခဲ့သည်. သူရက်နေ့တွင်မွေးဖွားခဲ့သည် 27 ဧပြီလ နှင့်ဤအတွက်တရားဝင်နေ့ဖြစ်လာခဲ့သည် 2014 နယ်သာလန်ဘုရင်၏နေ့ကိုဂုဏ်ပြုသောများအတွက်.